किन फिल्म उद्योग असफल हुँदैछ, उत्तरकथा | Martech Zone
अन्तिम डिसेम्बर, मैले फिल्म इन्स्ट्री किन असफल भइरहेको छ भन्नेमा एउटा प्रविष्टि लेखें। हुनसक्छ मैले यो लेख्नुपर्दछ किन यसले हामीलाई 'असफल' गरिरहेको छ। विडम्बनाको कुरा, यहाँ छ कि प्रविष्टिको उत्तरवर्ती। आज राती, बच्चाहरू र म गए र देख्यौं क्यारेबियन को समुद्री, मृत मानिस चेस्ट। उनीहरूले यसलाई केवल क्यारिबियनको समुद्री डाकुहरू भन्नुपर्दछ, हामी दुबै चलचित्रहरूका रूपमा हामी दुबै फिल्महरू यस प्रकारका पाउन सक्छौं।
चलचित्रमा प्रभावहरू अविश्वसनीय थिए र चलचित्र मनोरन्जनात्मक थियो। यद्यपि, सबैको लागि खराब नगरीकन, अन्त्य अन्त्य भयो हरेक अर्को फिल्मको लागि ढोका खुला छ। संक्षेपमा, मैले कुनै पनि अन्त नभएको १ 160० मिनेट चलचित्रमा हेरी। अन्त छैन! एउटा होइन!!! म पनि क्रेडिट मा अन्त मा प्यारा सानो दृश्य हेर्न को लागी बसे र त्यो द्वारा निराश थियो। (प्राविधिक रूपमा, त्यसले प्लाटको अर्को अंश अन्डेन्ड गर्यो)।
माफ गर्नुहोस्, डिज्नी! तिमीले यो उडायौ। म भिडियोमा समुद्री डाकू भाग तृतीयको लागि पर्खिरहेको छु। तपाईं आफैंमा लाज मान्नु पर्छ।
यसको मार्केटिंगसँग के गर्नुपर्दछ? समानन्तरहरू मेरो सहकर्मी प्याट कोयलले आफ्नो ब्ल्गमा विज्ञापन, मार्केटि। र ​​संस्कृति सम्बन्धी गरेको कुराकानीसँग मिल्दोजुल्दो छ। प्याट भन्छन्, "हामी ती कथाहरू प्रयोग गर्न सक्छौं मानिसहरू अरूले सुन्न चाहन्छन् भन्न को लागी, र उनीहरूको पैसा प्राप्त गर्न को लागी एक अस्थायी भावना को बदला। त्यो? मैले व्यवसायमा राख्न चाहेको होईन। "
चलचित्रहरू यस नियमको अपवाद हो ... हामी वास्तवमै त्यो अस्थायी पूर्तिको भावनाको लागि भुक्तान गरिरहेका छौं। जे होस्, शब्द पूर्ति एक निष्कर्ष वा अन्त्यको सन्दर्भ हो। कल्पना गर्नुहोस् यदि तपाईंले पूर्तिको अस्थायी भावना पनि प्राप्त गर्नुहुन्न। त्यो अवस्थामा, लक्ष्य भनेको उपभोक्तालाई धोका दिनु हो र उनीहरूको पैसा कडाईका साथ लिनु हो। यसैले यस फिल्मको बारेमा मलाई निरुत्साहित गर्यो। फिल्मको लक्ष्य भनेको यो फिल्म बनाउनको लागि भन्दा बढी पैसा कमाउनु मात्र थिएन, यो लक्ष्य भनेको मलाई अपूर्ण छोड्नु पनि हो ताकि म बढी पैसा खर्च गर्छु अर्को चलचित्र, पनि!
यो हुन्थ्यो कि सिनेमाहरू सिक्वेल लेख्न वा पुनः मेक गर्दै गर्दा कल्पित हुन्छन्। अब यो फिल्म निर्माणको व्यवसायको सबै अंश हो। हामीले 'आर्ट' मा फोकस गुमायौं र इन्फोमेरियल र चलचित्रहरूको मर्जले निलियो। कम्तिमा अधिक जानकारी दिएका एक पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी छ। यो चलचित्रको लागि मैले सोधेको पैसाको लागि धेरै ढिला भयो।
टैग: मृत मानिसको छातीडिज्नीचलचित्र मार्केटिचलचित्रक्यारेबियन को समुद्री
सेप्टेम्बर 4, 2006 मा 9: 34 AM
के तपाईंलाई थाहा छ हलिवुडले कसरी एक आर्ट फिल्म परिभाषित गर्छ?
यदि यसले पैसा कमाउँदैन भने यो एक आर्ट फिल्म हो।
त्यो भन्यो, मैले स्वीकार गर्नु पर्छ, जब मेरी श्रीमती र म सँगै चलचित्र हेर्ने मौका पाएका थियौं, हामीले साँच्चै समुद्री डाकूहरू देख्यौं। र थोरौगलीले रमाईलो गरे।
मेरो लागि, पाइरेट्स एक रमाईलो, र उद्यम फिल्म हो। यो अधिक हुन दाबी गर्दैन। र यस्तो फिल्मको रूपमा मलाई यो उत्कृष्ट लाग्दछ।